တက်သစ်စအဆိုတော် Jai Waetford နှင့် အတူ သီဆို ဖျော်ဖြေ မယ့် Selena Gomez ရဲ့ ဘန်ကောက် Live Show by popolay.com
တက်သစ်စအဆိုတော် Jai Waetford နှင့် အတူ သီဆို ဖျော်ဖြေ မယ့် Selena Gomez ရဲ့ ဘန်ကောက် Live Show
01 Jul 2016 1,168 Views
Selena Gomez အနေနဲ့ သူမရဲ့ ဘန်ကောက် ခရီးစဉ် ဖျော်ဖြေတင်ဆက်ပွဲမှာ အထူးဧည့်သည် အဆိုရှင် သြစတေးလျ တက်သစ်စ ကြယ်ပွင့် Jai Waetford နှင့် အတူ ဖျော်ဖြေတင်ဆက်ဖို့အတွက် ဝမ်းသာမိကြောင်းကို ပြောကြားခဲ့ပါသည် ။
Jai အနေနဲ့ ဇူလိုင်လ ၁၉ ရက်နေ့ တွင် ပြုလုပ်မယ့် Selena ရဲ့ Revival Tour ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားမှာ စတင်ဖျော်ဖြေ တင်ဆက်ပေးမည် ဖြစ်ပါသည် ။ အသက် ၁၇ နှစ် အရွယ်သာ ရှိသေးတဲ့ Jai ဟာ သြစတေးလျ နိုင်ငံရဲ့ နာမည်ကြီး 2013 Talent Show မှ နာမည်ကြီး အောင်မြင်လာသူ တစ်ဦးဖြစ်ပါသည် ။
ထို့အပြင် နာမည်ကြီးအဆိုတော်များရဲ့ သီချင်းများကို Cover ပြန်လည်ပြုလုပ်က သီဆိုထားသော သူ့ရဲ့ Youtube Video များဖြင့်လည်း နာမည် ကြီးကျော်ကြားလျက်ရှိပြီး လက်ရှိ Jai ရဲ့ Youtube Channel ဟာ Like လုပ်ထားသူပေါင်း ၆၂ သန်းကျော်ရရှိနေပြီဖြစ်ပါသည် ။ Jai ဟာ သူရဲ့ သီဆိုဖျော်ဖြေမှုအပိုင်းသာမက သရုပ်ဆောင်ပိုင်းမှာပါနာမည်ကြီးထင်ရှားသူဖြစ်ပြီး နာမည်ကြီး ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းတွဲ Neighbours မှာ Kylie Minouge, Delta Goodrem နှင့် Natalie Imbruglia တို့နှင့် အတူ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါသည် ။
Jai ဟာ သူရဲ့ EP Albume အသစ်ဖြစ်တဲ့ Heart Miles ကို မိတ်ဆက်ဖို့အတွက်နဲ့ ရက်မကြာသေးမှီက ထိုင်းနိုင်ငံကိုရောက်ရှိခဲ့ပြီး ဖျော်ဖြေပွဲကို လာရောက်ကြည့်ရှုမည့် ပရိတ်သတ်များရဲ့ ကြိုဆိုအားပေးမှုကို ရရှိထားပါသည် ။ " ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ရှိကြတဲ့ ကျွန်တော့် ပရိတ်သတ်တွေ ရှေ့မှာ ဖျော်ဖြေတင်ဆက်ဖို့အတွက် တကယ်ကို စိတ်လှုပ်ရှားမိပါတယ်" လို့ ဆယ်ကျော်သက်ကြယ်ပွင့် Jai မှ ပြောကြားခဲ့ပါသည် ။ " ကျွန်တော့် အတွက် တကယ့်ကို ကြီးမားတဲ့ အခွင့်ရေးတစ်ခုဖြစ်ပြီး Selena ရဲ့ ပွဲမှာ သီဆိုဖို့အတွက် မစောင့်နိုင်တော့ပါဘူး " လို့ ထပ်မံဖြည့်ဆွက်ခဲ့ပါသည် ။
သြစတေးလျ နိုင်ငံရဲ့ တက်သစ်စ ကြယ်ပွင့် Jai Waetford ရဲ့ ဖျော်ဖြေ တင်ဆက်မှုတွေကို လက်မလွှတ်စေဖို့ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ပထမဦးဆုံး ပြုလုပ်မယ့် Selena Gomez ပွဲကို တက်ရောက်နိုင်ပါသည် ။ Selena Gomez ရဲ့ Revival Tour ကို လာမည့် ဇူလိုင်လ ၂၉ ရက်နေ့တွင် ထိုင်းနိုင်ငံ မောင်းတောင်တန်နီ မြို့ Impact နယ်မြေ မှာ ကျင်းပမည် ဖြစ်ပါသည်။ လက်မှတ်များကိုတော့ ထိုင်းနိုင်ငံရှိ လက်မှတ်အရောင်းဆိုင်ကြီးများ သို့မဟုတ် www.thaiticketmajor.com တွင် ထိုင်းဘတ် ၂,၀၀၀ , ၃,၀၀၀ , ၄,၀၀၀ နှင့် ၅,၀၀၀ ဖြင့် ဝယ်ယူနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည် ။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို သိရှိလိုပါက ဖုန်း 0-2262-3838 သို့ဆက်သွယ်၍ လည်းကောင်း www.bectero.com သို့ဝင်ရောက်၍ လည်းကောင်း သို့မဟုတ် www.facebook.com/bectero, @BEC_Tero_Ent on twitter and BECTERO_ENTERTAINMENT on Instagram စသည့် လူမှုကွန်ယက်များတွင်လည်း ဝင်ရောက်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည် ။
ယခု ဖျော်ဖြေတင်ဆက်မှု သည်လည်း BEC-Tero Entertainment ရဲ့ အကောင်းဆုံးဖျော်ဖြေတင်ဆက်မှုများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်ပါသည် ။
Public Relations Department, BEC-Tero Entertainment
Payungjit Kosopa (Aey) PR Manager 089-511-2498 [email protected]
Thanaporn Kimyong (Stamp) PR Concerts & Events 093-328-4429 [email protected]
Tel. 02 262 3800 ext. 2817 Fax. 02 262 3921